Dharkiinleey oo sadex iyo labbo kaga adkaatay Waaberri – Radio Muqdisho
Dharkiinleey oo sadex iyo labbo kaga adkaatay Waaberri
Waxaa soo idlaatay ciyaar xiiso badan oo u dhaxeysay degmooyinka Dharkiinleey iyo Waaberi ee gobolka Benaadir.
Kulankaan oo geba-gebo u ahaa tartankii degmooyinka gobolka Benaadir ayaa ciyaartoyda labada degmo waxa ay soo bandhigeen ciyaar wanaag ay aad ugu riyaaqeen daawadayaashii garoonka ku sugnaa.
Kooxaha labada degmo ayeeysan midkoodna u suurta galin in ay Gool la yimaadaan 90-kii daqiiqo ee loogu tala galay ciyaarta, sidoo kale daqiiqo kooban oo ciyaarta lagu darayna uma suurta galin in ay Gool la yimaadaan.
Ugu dambeyn ayaa garsoorka ciyaartu go’aamiyay in Gool ku laad lagu kala baxo, waxa ayna natiijadu noqotay degmada Dharkiinleey oo la timid 3 Gool iyo Waaberi oo heshay laba Gool.
Sideed sano ka dib ayeey degmada Dharkiinleey ku guuleysatay koobka tartanka degmooyinka gobolka Benaadir.
Wasiirka Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya Marwa Khadiijo Maxamed Diiriye iyo Guddoomiyaha gobolka Benaadir ayaa degmada Dharkiinleey ugu hambalyeeyay guusha ay gaareen.